4 sabab oo keentay inay DF dalbato in dhaqaalaha laga joojiyo SOMALILAND - Caasimada Online
Home Warar 4 sabab oo keentay inay DF dalbato in dhaqaalaha laga joojiyo SOMALILAND
4 sabab oo keentay inay DF dalbato in dhaqaalaha laga joojiyo SOMALILAND
Muqdisho (Caasimadda Online) – Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa codsatay in dhaqaalaha laga joojiyo Somaliland, sida laga soo xigtay qoraal uu Wasiirka Qorsheynta, Jamaal Maxamed Xasan u qoray Deeqbixiyaasha Beesha Calaamka.
Sida laga soo xigtay qoraalka, heshiiskaas oo la saxiixay 2013-kii, dhaceyna 2017-dii, wuxuu dhigayey in Somaliland ay saami lamid ah maamulada kale ee dalka ku yeelaneyso Deeqaha caalamka laga helo.
Laakiin, qoraalkaan uu Wasiir Jamaal uqoray Beesha Caalamka, waxaa si cad loogu codsaday inay joojiyaan guud ahaan taageeradda dhinac walba leh oo ay siiyaan Maamulka Hargeysa, sababo badan darteeda.
Sababaha ayaa waxaa qeyb ka ah:
inay wiiqeyso wiiqayo in Soomaaliya laga hir-geliyo nidaamka Federaalka
in waxyaabo kale oo loo adeegsado
iyo Somaliland ku dhiiro gelineyso inay kasii go’ado dalka.
Maamulada ka jiro dalka oo dalbaday in Somaliland ay lamid noqoto Maamul Goboleedyada, haddii kale ay iyagana Beesha caalamka la xiriir doonaan.
Halkaan hoose ka akhriso waraaqaha uu diray Wasiir Jamaal